Antsirabe Nanao vava be ilay vehivavy nasaina namafa lalana
Vehivavy iray nilaza ho Ben’ny tanana no tratra tsy nanao aron-tava omaly alarobia 06 mey tao Antsirabe faritr’Antsenakely.
Tsy nijery ny maha-Ben’ny tanana azy anefa ireo mpitrandro ny filaminana satria samy ambany lalana ka nasaina namafa lalana ity vehivavy ity. Nandà mafy ny tsy hanao izany anefa ity vehivavy ity saingy tsy nanaiky ny mponina. Nitangoronan’ireto farany ary tsy nanaiky ireto farany raha tsy nandray kofafa ny anaovavy. Nanao vava be manoloana ny zava-nitranga moa ilay vehivavy nilaza ho Ben’ny tanana no sady nandrahona ihany koa izay fa mahafantatra ny jeneraly any an-toerana. Na izany aza tsy maintsy nefainy ny fafa lalana tokony nataony. Marihina moa fa ny olona milaza ho manana ny toerany tahaka ireny mihitsy no tokony hijoro ho modely hampianatra ny vahoaka hanao aron-tava amin’izao fotoanan’ny COVID 19 izao fa tsy sanatria hanao vavabe indray.